PressReader - Ilanga: 2018-07-12 - UBULAWELWE ISOKA ABESEHLUKENE NALO
UBULAWELWE ISOKA ABESEHLUKENE NALO
Ilanga - 2018-07-12 - Izindaba - THANDEKA NGOBESE
USHAQEKILE, wadideka umndeni wakwaDube, KwaMsane, eMtubatuba ngesenzo sowesifazane obhokode indodakazi yawo ngommese wayibulala ngeSonto, kubangwa isoka. Lona wesifazane obulale uNkz Nokulunga Dube (22), ugile lo mkhuba maqede washaya utshani - kumanje ugcwele amathafa.
Okudida umndeni wakwaDube wukuthi umufi ubesehlukene nesoka ebelibangwa, kodwa umsolwa ezitshela ukuthi basathandana. Ngokuthola kweLANGA ngodadewabo kamufi, UNkz Ntombenhle Dube, udadewabo ubethandana noMnu Nkule Gina obeziphilisa ngokwelusa izinkomo.
“Kuthe ngokuhamba kwesikhathi bahlukana, (uMnu Gina) waqonywa ngumsolwa. Kuthe emasontweni edlule umsolwa wafika lapha ekhaya ehamba nesoka lakhe, babiza udadewethu ngasesangweni engisola ukuthi isoka beliqhutshwe yilo wesifazane efuna ukuqinisekisa ukuthi lisathandana yini nodadewethu.
“Sengathi kube nokuhilizisana lapho, isoka laze ladelela udadewethu lithi mncane ngomzimba sengathi ukhahlanyezwe yingculaza. Ngokudinwa, udadewethu ubabize ngezibotho njengoba bobabili nentombi yakhe becwila ezinkambeni (zikaFaro). Ngize ngaphuma ngalikhuza isoka,” kusho uNkz Dube.
Uthi sidlulile lesi siwombe. Emuva kwaso umsolwa ubelokhu ephathisa imilayezo kubantu ethi lapho eyohlangana khona noNokulunga uyomkhombisa ukuthi isibotho yinto enjani.
“Emuva kwalokhu le ntombazane ibingasapheli ngalapha, yehla yenyuka. UNokulunga bengimkhuza ngithi makahlale ekhaya, angalokothi aphume ngoba bengisaba ukuthi bazolwa. Ngosuku lwesigameko nami bengingekho lapha ekhaya.
“Umsolwa kuthiwa ubone ukuthi kangikho - njengoba beselungapheli usuku engadlulanga ngasekhaya - wafika wambizela ngasesangweni (uNokulunga). Kuthiwa ufike wambuza ukuthi ubesho kubani ukuthi uyisibotho, okuthe esaphendula ebuza ukuthi aze asho njalo bebethini kuyena, umsolwa wavele wakhipha ummese kubhodisi wamgwaza phezu kwebele.
“Mina ngifonelwe sengitshelwa ukuthi uNokulunga ugwaziwe futhi usephuthunyiswe emtholampilo. Ufike emtholampilo wangaluthola ngesikhathi usizo lokudluliselwa esibhedlela. Ufike esibhedlela engasakwazi ngisho ukukhuluma, washona,” kusho uNkz Dube.
“Ngigcina ukukhuluma naye uNokubonga uthe usezovele azixolisele kule ntombazane yize engazange enze lutho, ukuze le ndaba idlule.Ubenenhliziyo enhle uNokulunga, engumuntu ohlale ezihlekela nje,” kuchaza uNkz Dube.
Uthi abazali bakamsolwa bafikile baxolisa kodwa nakho okungasho lutho kubona njengoba befuna umthetho wenze okufanele.
ILANGA lehlulekile ukuthola uMnu Gina. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLt Colonel Thulani Zwane, uthi namanje umsolwa usagcwele amathafa. Uthi bacela noma ngubani ongaba nolwazi olungaholela ekubanjweni kwakhe, ancize maphoyisa indlebe.
UNKZ Nokulunga Dube ogwazwe wabulawa ngowesifazane obesola ukuthi usathandana nendoda yakhe.